Raw boldenone vovoka (846-48-0) Mpanao & mpamatsy - Factory
Ny vovobony Boldenone Rohdeone no steroid malaza indrindra amin'ny fampiasana veterinary. Manana hormone lahy be dia be izy ary miasa am-pahibemaso. Boldenone dia mahomby sy miorina tsara amin'ny fampiroboroboana ny fitomboan'ny hozatra sy ny tanjaka. Raha raisina amin'ny zava-mahadomelina hafa dia ho tsara kokoa ny vokatra fanafody.
Rohdeon Boldenone voly (846-48-0) video
Vola madinika Boldenone (846-48-0) Description
Ny voankazo Boldenone, dia steroid anabolic-androgenic steroid (AAS) sy ny 1 (2) -dehydrogenated analogue of testosterone. Amin'ny fanafody pharmaceutika, dia ampiasaina izy io toy ny Boldenone tsy ampy aryecylenate, ny esdecylenate ester. Ny asan'ny boldenona dia miteraka anabolika, miaraka amin'ny hery potika ambany. Ny voankazo Boldenone vita amin'ny Boldenone dia hampitombo ny fihazonana azota, ny proteinina, mampitombo ny fiankinan-doha ary manentana ny famotsorana erythropoietin amin'ny voa. Ny vovon-drakotra vita amin'ny Boldenone dia novolavolaina tamin'ny fikasana hanangana methandrostenolone (Dianabol) mipetaka efa hatry ny ela, noho ny tsy fahampian'ny androgen.
Vovon-doko vita amin'ny Boldenone (846-48-0) Specifications
Product Name Vola madinika Boldenone
Anarana simika Boldenone; Dehydrotestosterone; 846-48-0; 1,2-Dehydrotestosterone
Brand Name Boldebal H, Equipoise, ary Sybolin
molekiolan'ny Formula C19H26O2
molekiolan'ny Wvalo 286.415 g / mol
mitsonika Point 164-166 ℃
vayma- Point 435.6 ° C amin'ny 760 mmHg
Application Ny vovoka Boldenone dia miasa amin'ny endriny amin'ny endri-tsolika anabolika. Nampiasaina izy io mba hampitombo ny fitomboan'ny taovam-pisefoana sy ny fialan-tsasatra amin'ny biby fiompy sy ny olombelona
Inona no atao hoe vovoka Row Boldenone (846-48-0)?
Boldenone dia 3-oxo-Delta (1), Delta (4) -terôida nosoloin'ny vondrona oxo ao amin'ny toerana 3 sy ny vondrona beta-hydroxy ao amin'ny 17. Ny steroid anabolic androgenic izay natsangana ho an'ny fampiasana veterinera. Ity dia steroid XDUMXbeta-hydroxy, steroide anabolic androgenic ary 17-oxo-Delta (3), Delta (1) -steroid.
Ny Boldnlone dia iray amin'ireo malaza indrindra amin'ny fitsaboana steroïde, ampiasaina amin'ny fitsaboana avy amin'ny vétérinaire. Ny halatra hormone dia avo dia avo tokoa, ny vokatra voajanahary dia tena mafy ihany koa.Kao Dan ketone dia mety hahomby sy mafy orina ary matanjaka ny tanjaka, Ny zava-mahadomelina hafa, no be mpampiasa indrindra amin'ny fitsaboana amin'ny fomba tsotra indrindra mba hitazonana ny hozatry ny "cycle" iray amin'ny steroid (sy ny vondrona hafa ny zava-mahadomelina, sns.). Ankoatra izany, ny fepetra ara-boajanahary ao amin'ny vatan'olombelona dia afaka mamokatra volan'ny Boldenone.
Ahoana ny Rohdy Boldenone (846-48-0) asa
Boldenone, dia steroide anabolic izay ampiasaina amin'ny fampiasana veterinerina, hampitombo ny fihazonana azota, proteinina, hampiakatra ny appetito ary hamporisika ny famotsorana erythropoietin amin'ny voa. Boldenone dia novolavolaina tamin'ny fanandramana nanandrana namorona methandienone (dianabol) efa hatry ny ela, raha ny marina dia tsy miasa tahaka ny methandrostenolone akory ny boldenone. Manana fiainana lava be izy io, ary afaka miseho amin'ny fitsapana steroid nandritra ny taona 1.5, noho ny tsy fahampian'ny Estera tsy mifandray amin'ny steroid. Ny habetsaky ny zava-mahadomelina dia mora hita mandritra ny volana maromaro aorian'ny fampiasana tsy tapaka.
Vovon-doko vita amin'ny Boldenone (846-48-0) Dosage
Tsy kely noho ny 400-600mg isan-kerinandro, aza ampitomboina ny dosage eo ambany 600mg, satria tsy hisy tombony fanampiny izany. Ny halavan'ny famokarana dia ny 10-12weeks.
Vola madinika Boldenone (846-48-0) soa
Boldenone vovoka afaka mitombo ny fihazonana azota, ny proteinina, mampitombo ny fiankinan-doha ary manentana ny famotsorana erythropoietin amin'ny voa. Bilaogera sy atleta amin'ny fanatanjahan-tena maromaro no nampiasa Boldenone mba hananganana hozatra sy hampitombo ny fahombiazany. Na dia mety hampitombo ny herin'ny masirasira, ny hery ary ny fahaizana hanofana kokoa sy henjana kokoa ny steroids anabolic anabolic.
Hividy Boldenone vovoka (846-48-0) avy amin'ny Buyaas.com